မျှော်နေကြတဲ့ သင်တန်းသားဟောင်း/သစ်တွေအတွက် ... :) ☆ Pre-intermediate ( Part-2 ) နဲ့ Intermediate ( Part-1 ) - Learn English Actively and Effectively in Yangon !!! 09 4311 5202 ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / သင်တန်း အချိန်ဇယား / သင်တန်း အကြောင်း စုံစမ်းရန် / မျှော်နေကြတဲ့ သင်တန်းသားဟောင်း/သစ်တွေအတွက် ... :) ☆ Pre-intermediate ( Part-2 ) နဲ့ Intermediate ( Part-1 )
မျှော်နေကြတဲ့ သင်တန်းသားဟောင်း/သစ်တွေအတွက် ... :) ☆ Pre-intermediate ( Part-2 ) နဲ့ Intermediate ( Part-1 )
Zin Zae 1:10 AM သင်တန်း အချိန်ဇယား , သင်တန်း အကြောင်း စုံစမ်းရန် Edit
သင်တန်းသားများ အဆင်ပြေ တိုးတက်စေဖို့ ၁၀၀%
အာမခံ သင်ကြားပေးနေတဲ့ *** Active English သင်တန်း ***
မျှော်နေကြတဲ့ သင်တန်းသားဟောင်း/သစ်တွေအတွက် ... :)
☆ Pre-intermediate ( Part-2 ) နဲ့ Intermediate ( Part-1 )
တန်းခွဲသစ် တွေ ဖွင့်ပေးဖို့ စီစဉ်နေပါပြီ ။ ☆
< Post အောက်ဘက်မှာ Elementary to Pre-intermediate ( Part-1 )
အချိန်ဇယားတွေလည်း May/June လတွေအတွက် တွဲပြီး ထည့်ပေးထားပါတယ် ။
သင်တန်းစုံစမ်းသူအများစု မေးလေ့ရှိတာတွေလည်း ဖြေပေးထားပါတယ် :) >
English ဘာသာစကား အရံအတားကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ !!!
#ActiveEnglishသင်တန်း ရဲ့ ဟန်အတိုင်းပဲ
Speaking နဲ့ Listening ကို အဓိက လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးသွားမှာပါ ။
Pair Work ( ၂ ယောက် တစ်တွဲ ) လေ့ကျင့်တာတွေ အပြင်
Group Work ( အဖွဲ့လိုက် ) လေ့ကျင့်တာတွေ ၊
Group Discussion -အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးခိုင်းပြီး
ပြန်ပြီး Presentation လုပ်ခိုင်းတာတွေ ပါပါမယ် ။
( သင်တန်းသားတွေရဲ့ Level အလိုက် ချိန်ညှိပြီး လုပ်ပေးသွားမှာပါ ။ )
Cambridge က ထုတ်တဲ့ Interchange သင်ရိုးကို အဓိကထားသင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့်
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ပြင်ပ တကယ့် English စာ/စကား ကိုလည်း ထိတွေ့ခွင့်ရအောင်
Personal Development / Motivation / Goal-Setting / Self-Managment စတဲ့
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်စေမယ့် အကြောင်းအရာကောင်းတွေကို
ဆရာ ကိုဇင်ဇေက အားဖြည့် သင်ပေးသွားမှာပါ ။ :)
ဆရာ ကိုဇင်ဇေ ရဲ့ Page က ဒီမှာပါ
ဆရာ ကိုဇင်ဇေ စီစဉ် ထုတ်ဝေပေးနေတဲ့
မြန်မာ့အိပ်မက် ( လူငယ်တိုးတက်ရေး မဂ္ဂဇင်း ) Page က ဒီမှာပါ
ဆရာတွေကို မရှိန်အောင် ၊ မေးစရာရှိတာကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မေးရဲအောင်
သင်တန်းသားတွေ အချိန်တိုတိုနဲ့ နားလည်လွယ်အောင် လို့
ဆရာတွေက English လို ( ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ) တောက်လျှောက် ပြောသင်တဲ့ နည်းစနစ်ကို မသုံးပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားတွေရဲ့ Level အလိုက်
English လို ညှပ် ညှပ်ပြီး ရှင်းပြတာမျိုး လုပ်ပေးသွားမှာပါ ။ :)
သင်တန်းသားတွေ ရရင် ရသလောက် ဆွဲတင်သွားမှာ ဖြစ်ပေမယ့်
Pre-intermediate ( Part-2 ) အတွက်
Target Vocabulary Range က ( 4,000 to 5,000 ) ပါ ။
အနည်းဆုံး 2,500 to 3,000 Vocab Range အခံ ရှိရင် အဆင်ပြေမှာပါ ။
Intermediate ( Part-1 ) အတွက်
Target Vocabulary Range က ( 5,000 to 6,500 ) ပါ ။
အနည်းဆုံး 4,000 to 5,000 Vocab Range အခံ ရှိရင် အဆင်ပြေမှာပါ ။
< အခုမှ စပြီး သင်တန်းတက်မယ့်သူ / အခြေခံကနေ စချင်သူ /
Elementary to Pre-intermediate ( Part-1 ) တက်မယ့်လူတွေက
အနိမ့်ဆုံး ပညာအရည်အချင်း ၁၀ တန်းအောင်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ် ။
ဘွဲ့ရပြီးသူတွေ / လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နေသူတွေလည်း
Level( 1 )- Part (1) < Elementary to Pre-intermediate >
တန်းကနေပဲ စတက်ပါဗျာ ။
တကယ်လို့ စာ မလိုက်နိုင်ရင် အတန်းမစခင် (ဒါမှမဟုတ်) ပြီးသွားတဲ့အခါ
ကျွန်တော် (ဆရာကိုဇင်ဇေ) နဲ့ တစ်ဦးချင်းတွေ့ခွင့်တောင်းပြီး ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် ။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ကိုယ့် အခြေအနေကို ပြောပြတိုင်ပင်ရင်
ကျွန်တော်တို့ အထိရောက်ဆုံး ကူညီလမ်းပြ သင်ကြားပေးမှာပါ ။ >
သင်တန်းကြေးက Level တစ်ခုစာ အတွက်ကို ၄ သောင်းခွဲ ပါ ။
စာအုပ်စာတမ်း / အသံဖိုင် နဲ့ Softwares တွေ ပါ အပြီးအစီးပါ ။
စာအုပ်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ mini-library သုံးစွဲခွင့်လည်း ပါပြီးသားပါဗျာ ။
စာဖတ်ကျင့်မရှိသေးတဲ့လူတွေကို ဘယ်စာအုပ်တွေကို ဖတ်သင့်တယ်ဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးသွားဦးမှာပါ ။
သင်တန်းသားတွေ အတွက် လိုအပ်မယ့် / အားဖြည့်လေ့လာလို့ရမယ့်
Ebooks တွေ နဲ့ Audio/Video Files တွေလည်း အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ် ။
ဒေတာတွေကို ပေးရုံတင် ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပဲ ဘာပြီး ဘာကိုလေ့ကျင့်ရမယ် ။
ဘာနဲ့ ပြန်တွဲ လေ့ကျင့်ရမယ် ဆိုတာတွေပါ လမ်းညွှန်ပေးမှာပါ ။
တက်ချင်လို့ စာရင်းတော့ပေးထားပြီး မအပ်ရသေးတဲ့ သင်တန်းသားဟောင်းတွေ /
တက်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သင်တန်းသားသစ်တွေ ရှိခဲ့ရင်
09 4311 5202 / 09 2522 74890 / 09 25000 5174 ကို ဖုန်း သေချာ ကြိုဆက်ထားလိုက်ပါ ။
လူပြည့်သွားမှာ စိုးရင်တော့ စောစောစီးစီး
လူ ကိုယ်တိုင် လာအပ်ထားလိုက်တာ ပို အဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ ။
English ဘာသာစကား အရံအတားကို ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေဗျာ ။
May/June လ အတွင်းမှာ
☆ Pre-intermediate ( Part-2 ) တန်းခွဲ ( ၄ ) တန်း စီစဉ်ထားပါတယ် ။
Sat/Sun ( 5:00-6:30 PM )
>3Months > 45,000 kyat > Starting Date = 21.5.2016
Mon,Tue,Wed,Thurs ( 12:00 - 2:00 PM )
>6Weeks > 45,000 kyat > Starting Date = 23.5.2016
Thursday,Friday ( 6:30 - 8:00 PM )
>3Months > 45,000 kyat > Starting Date = 26.5.2016
Sat/Sun ( 7:00 - 8:30 AM )
>3Months > 45,000 kyat > Starting Date = 4.6.2016
☆ Intermediate ( Part-1 ) တန်းခွဲ ( ၁ ) တန်း စီစဉ်ထားပါတယ် ။
>3Months > 45,000 kyat > Starting Date = 2.6.2016
သင်တန်း မတက်ဖြစ်သေးလည်း www.facebook.com/mmenglishlearning ကနေတဆင့်
English သင်ခန်းစာများကို လေ့လာနိုင်ပါတယ် ။
Ebooks နဲ့ Moblie Application လိုချင်ရင်လည်း
comment/message box မှာ တောင်းဆိုထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ
ဆက်သွယ်ရန် : 09 4311 5202 / 09 2522 74890 / 09 25000 5174
သင်တန်းလိပ်စာ : အမှတ် ၂၉ / A ၊ မြေညီထပ် ၊ ၁၆၇ လမ်း ၊ တာမွေကြီး (ခ) ရပ်ကွက် ၊ တာမွေမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
( May နှင့် June လ အချိန်ဇယားပါဝင်သည် )
English ဘာသာစကား နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲ ကြုံနေရရင် ...
သိတော့ သိတယ် ပြောလို့ မထွက်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာမျိုး ကြုံနေရရင်...
ဘာဆက်လုပ်လို့ လုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိဘူး ဖြစ်နေရင် ...
English ဘာသာစကား လေ့လာနည်း စနစ်တွေကိုပါ သေချာလေ့လာလိုပြီဆိုရင် ...
စေတနာ ထားပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးသင်ကြားပေးတာမျိုး ကို လိုအပ်နေပြီဆိုရင်....
ဆရာ ကိုဇင်ဇေ ကိုယ်တိုင်
( အခြား သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံရှိပြီ စေတနာ ပြည့်ဝတဲ့ ဆရာများနဲ့ အတူ )
ဦးစီး တည်ထောင် သင်ကြားနေတဲ့
Active English ကို လာရောက် လေ့လာကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ
May လ အတွင်းမှာ Elementary to Pre-intermediate ( Part-1 )
တန်းခွဲ ၁၁ တန်း စီစဉ်ပေးထားပါတယ် ။
လက်ရှိမှာ တန်းခွဲ ၈ တန်း က လူပြည့်သွားပြီမို့လို့
အချိန်ဇယားမှာ ထည့်မရေးပေးလိုက်တော့ပါဘူး ။
☆ Elementary to Pre-intermediate Part (1) Level တန်းခွဲများ
Sat/Sun ( 9:30 to 11:00 AM )
>3Months > 45,000 kyat > Starting Date = 28.5.2016
Mon,Tue,Wed,Thu ( 4:00 to 5:30 PM )
>2Months > 45,000 kyat > Starting Date = 16.5.2016
Mon,Tue,Wed,Thu ( 7:00 to 8:30 AM )
>2Months > 45,000 kyat > Starting Date = 24.5.2016
May လ အတွင်းမှာ
☆ Pre-intermediate ( Part-2 ) Level တန်းခွဲ ( ၃ ) တန်း စီစဉ်ထားပါတယ် ။
June လ အတွင်း ဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲများ ( ၁၁ တန်း )
☆ Elementary to Pre-intermediate - Part ( 1 ) Level တန်းခွဲများ
Mon,Tue,Wed,Thurs ( 9:00 - 11:00 AM )
>6Weeks > 45,000 kyat > Starting Date = 6.6.2016
Mon,Tue,Wed,Thurs ( 5:30 - 6:30 PM )
>3Months > 45,000 kyat > Starting Date = 8.6.2016
Mon,Tue,Wed,Thurs ( 6:30 - 8:00 PM )
>2Months > 45,000 kyat > Starting Date = 13.6.2016
>6Weeks > 45,000 kyat > Starting Date = 20.6.2016
Mon,Tue,Wed,Thurs ( 7:00 - 8:30 AM )
>2Months > 45,000 kyat > Starting Date = 27.6.2016
Sat/Sun ( 3:30 - 5:00 PM )
>3Months > 45,000 kyat > Starting Date = 11.6.2016
Sat/Sun ( 6:30 - 8:00 PM )
Sat/Sun ( 9:30 - 11:00 AM )
>3Months > 45,000 kyat > Starting Date = 19.6.2016
Sat/Sun ( 2:30 - 3:30 PM )
☆ Pre-intermediate ( Part-2 ) Level
☆ Intermediate ( Part-1 ) Level
Thursday/Friday ( 6:30 - 8:00 PM )
သင်တန်းလိပ်စာ : အမှတ် ၂၉ / A ၊ မြေညီထပ် ၊ ၁၆၇ လမ်း ( ရာပြည့်ဈေးလမ်း ) ၊
( တာမွေ အဝိုင်းထိပ် မှတ်တိုင် / ကျောင်းရှေ့ မှတ်တိုင် တို့တွင် ဆင်းပါ )
Active English သင်တန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
မေးမြန်း စုံစမ်းလေ့ ရှိတာလေးတွေ စုပြီး ဖြေပေး လိုက်ပါတယ်။
၁။ သင်ကြားမှု ပုံစံ
♦ Applied English ကို အဓိက ထားပြီးသင်မှာပါ…4skills လုံး သင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် Listening နဲ့ Speaking ကို (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ဦးစားပေးသွားမှာပါ။
♦ သင်ရိုးကို ခိုင်မာပြီး စနစ်ကျအောင် Cambridge University ရဲ့ Course တွေကို ယူသုံးပါတယ်။ ကျန်တဲ့ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတော့ တစ်ခြား Cambridge သင်ရိုးမှာ မပါတဲ့ လိုအပ်မယ် ထင်တာလေးတွေ၊ သင်တန်းရဲ့ အဓိက ဟန်ဖြစ်တဲ့ Personal Development, Motivation, Effective Thinking, Successology စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သင်တန်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်အတိုင်း ဖြည့်စွက်ပြီး သင်ပေးပါတယ်။
♦ (Reading & Writingက အရင်ကျောင်းတွေမှာလဲ အတော် လုပ်ခဲ့ပြီးသား ဖြစ်ကြမှာပါ။) ဒီတော့ အဓိက အားနည်းနေတဲ့ အပိုင်းတွေကို အရင် စကိုင်မှာပါ။
Grammar အဓိက ထားပြီး သွားတဲ့ သင်ကြားမှု ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ အသုံးချ ဘာသာစကား သင်ကြားရေး ပုံစံကို အဓိက ထားမှာပါ။ (ပြောချင်တာက ကျောင်းသင် ပုံစံမဟုတ်ဘဲ
Grammar က အနောက်က လိုက်မှာပါ။)
♦ လက်ရှိ စဖွင့်တဲ့ သင်တန်း တန်းခွဲတွေမှာ သဒ္ဒါကို အလွန်အမင်း ဦးစားပေးပြီး မသင်ပါဘူး။ နားထောင်မှု စွမ်းရည်၊ တုံ့ပြန်နိုင်မှု စွမ်းရည် ၊ တွေးခေါ်မှု စွမ်းရည်၊
ပြောဆို ဆွေးနွေးမှု စွမ်းရည်တွေကို လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးဖို့အတွက် အချိန် ပိုပေးချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
♦ Grammar တအား အားနည်းတဲ့ ကျောင်သားတွေ အတွက်တော့ လိုအပ်သလောက်ကို ညှိပြီး အကြံပေး လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။ ဆရာကိုယ်တိုင် အချိန် အနည်းငယ် ပေးပြီး တွဲဖက် လေ့လာရမယ့် ဖြည့်စွက် စာအုပ်တွေနဲ့ လေ့လာရမယ့် ပုံစံတွေကို ဆွေးနွေးပေးပါတယ်။ အချိန် အခက်အခဲကြောင့် တစ်ဦးချင်း ခေါ်ပြီး ထပ်သင်ပေးတာမျိုး မလုပ်နိုင်ပေမယ့် အဆင်ပြေမယ့် တန်းခွဲတွေမှာထပ်ကျော့ ပြီး တက်ရောက် လေ့လာလေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ သင်တန်းမှူးတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်။
♦♦♦ တကယ်တမ်းတော့ ဇွဲလေး နည်းနည်း ထည့်လိုက်ရင်တော်ရုံ အားနည်းသူတွေတောင် လိုက်နိုင်ကြပါတယ်။ ♦♦♦
၂။ သင်ကြားပေးမည့် ဆရာများ
♦ သင်မယ့်ဆရာထဲမှာ ကျွန်တော်( ကိုဇင်ဇေ )ပါ ပါတယ်။
တခြားပြင်ပက သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆရာတွေ ပါ ပါတယ်။
၃။ “သင်တန်းကြေး ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်အမ်းပေးခြင်း”
♦ သင်ကြားမှု ပုံစံနှင့် မိမိ၏ တိုးတက်မှုအပေါ် ကျေနပ်မှု မရှိရင်သာ တကယ် ငွေပြန်အမ်း ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်သင်တန်းသားတွေကိုကိုယ်ချင်းစာလို့ဒီအစီအစဉ် ကို ထည့်ပေးတာပါ။
♦ စာတတ်၊ စာတော်တိုင်းလည်း စာမသင်တတ်ပါဘူး။ စာသင်တတ်တိုင်းလည်း ကိုယ်နဲ့ကိုက်မယ်လို့သေချာပေါက် မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ သင်တန်းရဲ့ ဟန်နဲ့ မကိုက်ရင် မြန်မြန် တခြား ကိုယ်နဲ့ ပိုအဆင်ပြေတဲ့ ဆရာ ရှာနိုင်ဖို့ ဒီအစီအစဉ်ကို ထည့်ပေးထားတာပါ။
၄။ သင်တန်းတွင် လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားခြင်း။
♦ တန်းခွဲ တစ်ခုမှာ လူဦးရေ (၂၀ - ၃၀) ယောက် အထိပဲ လက်ခံပါတယ်။အသစ်ဝင်လာတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အဟောင်းတွေနဲ့ ရောသင်တာမျိုး ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းမှာ လုံးဝ မရှိပါဘူး။
(လူဟောင်းတွေကိုသာ အားမရရင် အသစ်တန်းမှာ တစ်ခါတလေ ဝင်တက်ခွင့် ပေးတတ်ပါတယ်။)
၅။ သင်တန်းကာလ (တစ်ခု) ပြီးတိုင်း နောက် Level တွေ ရှိလား? လပိုင်းလောက်ပဲ တက်ပြီး ကျွမ်းကျင်နိုင်လား ... ?
♦ သင်တန်းကာလ တစ်ခုပြီးတိုင်း နောက် level တွေ ရှိပါတယ်။ ဆက်တက်လို့ရပါတယ်။
♦ အကယ်၍ နောက် level တွေဆက်မတက်ဖြစ်ရင် ဘယ်စာအုပ် စာတမ်းတွေကို ဘယ်လို အသုံးပြုပြီး ဆက်လက် လေ့လာသွားရမယ် ဆိုတာကိုလည်း လမ်းညွှန် ပေးပါတယ်။
♦ တကယ် ကျွမ်းကျင်ချင်ရင် ဘယ်ပညာရပ်မဆို
“နာရီ တစ်သောင်း” အချိန်ပေးရတယ်လို့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ယုံကြည်ပါတယ်။
♦ လပိုင်းလောက် တက်မယ်။ ဟိုဟာ ဖြစ်မလား?.. ဒီဟာ ဖြစ်မလား ဘုမသိ ဘမသိ (မေးသူရဲ့ အနေအထားကို မသိဘဲ) ကျွန်တော်တို့ သင်တန်းမှ ပြန်မဖြေချင်ပါဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ လာမမေးပါနဲ့။
< အဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လည်း သီးသန့်ရေးပေးထားပါတယ် >
၆။ သင်တန်းသားဟောင်းများ အတွက် အခွင့်အရေး။
♦ သင်တန်းပြီးဆုံးသွားသော်လည်းသင်တန်းသားဟောင်း တွေဟာ မိမိရဲ့ ကိုယ်တိုင်လေ့လာမှု လမ်းခရီးမှာအခက်အခဲ တွေရှိခဲ့ရင် အမြဲတတ်နိုင်သလောက် အကြံပေးပေးပါတယ်။
♦ သင်တန်းပြီးသွားလည်း English ဘာသာစကား လေ့လာမှုနဲ့ အဆက်မပြတ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး Channel ပေါင်းစုံ၊ Media ပေါင်းစုံ သုံးပြီး ဆက်သွယ် ပေးထားပါတယ်။
- Mobile App တွေ နဲ့ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ် ။
၇။ သင်တန်းသားများအတွက် စာကြည့်တိုက် ထားရှိပေးထားခြင်း။
♦ စာကြည့်တိုက် ထားပေး ထားပါတယ်။
စာအုပ်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော် ရှိပါတယ် ။
စာအုပ်တွေ ငှားဖတ်လို့ ရပါတယ်။
ဘယ် စာအုပ်တွေ ဖတ်သင့်ကြောင်းပါ လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။
English ဘာသာစကားဆိုင်ရာ စာအုပ်များသာမက English ဝတ္ထုတိုများ၊ စီးပွားရေး နှင့် တိုးတက် အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာ English ၊ မြန်မာ စာအုပ် စာပေများ၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ အခြားသုတ၊ ရသနှင့် နည်းပညာ စာအုပ်များကို သင်တန်းသားများအတွက် စီစဉ်ထားရှိ ပေးထားပါတယ်။
၈။ Level ဘယ်နှစ်ခုရှိလဲ ? ဘယ်လိုတွေခွဲထားလဲ ?
♦Active English မှာ အဓိက Level3ခု ခွဲထားပြီး အသေးစိတ်လိုက်ရင်တော့ Level6ခု ဖြစ်သွားပါတယ် ။
1. Elementary to Pre-intermediate Part-1
2. Pre-intermediate ( Part-2)
3. Intermediate ( Part-1)
4. Intermediate ( Part-2)
5. Upper Intermediate ( Part-1)
6. Upper Intermediate ( Part-2 )
ဘယ် Level တက်ရမယ်ဆိုတာကို
Placement Test တော့ ဖြေစရာ မလိုပါဘူး ။
Level-1 ကနေ စမတက်ဘဲ ကျော်တက်ချင်တယ်ဆိုရင် သင်တန်းကိုလူ ကိုယ်တိုင် လာဆွေးနွေးတာ ပို အဆင်ပြေပါတယ် ။
တခြား ဘယ်သင်တန်းတွေ မှာ ဘယ်လောက် ကြာအောင် လေ့လာဖူးတယ် ။ဘယ် သင်ရိုးတွေနဲ့ ဘယ် အဆင့်အထိ လေ့လာဖူးတယ် ဆိုတာတွေ နဲ့ ချိန်ညှိပြီး သင့်တော်မယ့် Level ကို အကြံပြုပေးပါတယ် ။
တက်ရောက်မယ့်လူဘက်ကလည်း ကိုယ်တိုင် ချင့်ချိန် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ
၉။ သင်တန်းကြေးက ဘယ်လောက်လဲ?
စာအုပ်စာတမ်း ကြေး ထပ်ပေးရသေးလား ?
♦ သင်တန်းကြေးကLevelတစ်ခုစာ( ၁လခွဲ/၂လ/၃လ ) အတွက်ကို ၄ သောင်းခွဲ ပါ ။စာအုပ်စာတမ်းကြေး ထပ်ပေးစရာ မလိုပါဘူး သင်တန်းကြေး လေးသောင်းခွဲက အပြီးအစီးပါ။
စာအုပ်စာတမ်း မှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ အပြင် ဗလာစာအုပ် ဘောပင်ကအစပါလို့ သင်တန်းသားဘက်က ဘာမှယူလာစရာမလိုပါဗျာ
☆ သင်တန်းသား/သူ များ ဘက်က ယူလာရမှာကတော့
လူနဲ့ စိတ် (စာသင်ချင် ၊ စာလုပ်ချင်) ပါပဲ
အသံဖိုင် နဲ့ Softwares တွေ လည်း အပြီးအစီးပါ ။ စာအုပ်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ mini-library သုံးစွဲခွင့်လည်း ပါပြီးသားပါဗျာ
၁၀။ တန်းခွဲသစ် ဘယ်အချိန်တွေ ဖွင့်ဖို့ရှိလဲ?
- အပေါ်မှာ May/June လ အတွက် အချိန်ဇယားတွေ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ ။
မတွေ့မိလိုက်ရင် / မရှင်းတာရှိရင်
Comment/Message မှာ မေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ ။
☆ လူဦးရေ အနည်းဆုံး ၂၀ အများဆုံး ၃၀ လက်ခံပါတယ်။
လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားတဲ့ တန်းခွဲတွေ ဖြစ်လို့ကြိုတင်စာရင်ပေးအပ်နှံပေးမှ အဆင်ပြေမှာပါ
( တနင်္လာ မှ ကြာသပတေး = ၆ ချိန် )
7:00-8:30 AM /
9:00-11:00 AM /
1:00-3:00 PM /
4:00-5:30 PM /
5:30-6:30 PM /
( စနေ / တနင်္ဂနွေ = ၇ ချိန် )
9:30AM - 11:00 AM/
11:30 - 2:00 PM ( တနင်္ဂနွေ သီးသန့်အတန်း )/
2:00-3:30 PM /
3:30-5:00 PM /
5:00-6:30 PM /
♦ လတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ အချိန်အလိုက် တန်းခွဲသစ်တွေ ဖွင့်ပေးနေပါတယ်
၁၁။ သင်တန်းနေရာက ဘယ်မှာလဲ? ဘယ်လိုလာရမလဲ?
♦ သင်တန်းလိပ်စာ : အမှတ် ၂၉ / A ၊ မြေညီထပ် ၊
၁၆၇ လမ်း (ရာပြည့်ဈေးလမ်း လို့လည်းခေါ်ပါတယ်) ၊ တာမွေကြီး (ခ) ရပ်ကွက် ၊ တာမွေမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
မှတ်တိုင်နားရောက်လို့ သင်တန်းလိပ်စာမေ့နေခဲ့ရင် / ရှာမတွေ့ခဲ့ရင် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်ပြီး
09 2522 74890
09 25000 5174
၁၂။ ဘယ်နေ့တွေ သင်တန်း ဖွင့်ပါသလဲ ?
ဘယ် အချိန် လာအပ်လို့ ရပါသလဲ ?
♦ သောကြာနေ့ က လွဲလို့ ကျန်တဲ့ ရက်အားလုံး
မနက် ၇ နာရီ မှ ည ၈ နာရီအထိ သင်တန်းဖွင့်ပါတယ် ။
လာအပ်လို့ ရပါတယ် ။
<<< သင်တန်း Page နဲ့ Website မှာ
သင်ခန်းစာ အချို့ ကြိုတင် လေ့လာလို့ ရပါတယ် ။
သင်တန်း မတက် ဖြစ်သေးလည်း အဝေးကနေ လေ့လာလိုတယ်ဆိုရင်
Message or Comment box ကနေ လေ့လာစရာ
- Mobile Application ( Post အသစ်တင်တိုင်း App ကနေ ဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းနိုင်မည့် )
- Ebooks တွေ ( Post အဟောင်းများ စုစည်းမှု ၂ အုပ်) ကို တောင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ
ဒီ Page မှာလည်း English ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ / သင်ခန်းစာများကို ပုံမှန်တင်ပေးနေတာမို့လို့မလွတ်တမ်း ဖတ်ချင်ရင် Page ကို Like လုပ်ပြီး See first ယူထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ ။
နင်းတက်သွားရမယ့် လှေကား ဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ ...
မင်း လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ရင် ...
မင်း လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ရင် လမ်း တစ်ဝက် ရောက်နေပြီ :) ကိုဇင်ဇေ #ActiveEnglishQuotes www.ActiveEnglishMyanmar.com <<< အလားတ...
တန်းခွဲသစ် နေ့လည် ၃-၅ ဖွင့်လိုက်ပါပြီ :)
ကျောင်းပိတ်တုန်း ရတဲ့အချိန်လေးကို နယ်က လာတက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ အဆင်ပြေအောင် တန်းခွဲသစ် တစ်ခု စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ Monday to Thursday ( တစ်...
ရေဘေးဒဏ်ခံ ဒေသတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့လည်း တတ်စွမ်းသလောက် အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားစီစဉ်နေပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ #ActiveEnglish သင်တ...